6 kacha mma ịhịa aka n'ahụ mmanụ 2020-Essential Oils Bulk | AromaEasy
Ihe na April 9, 2020 April 9, 2020 by Matt
ịhịa aka n'ahụ mmanụ dị mkpa
Dị ka ụmụ mmadụ, anyị niile na-eche ya mgbe ụfọdụ - nrụgide na-adịbiga oke oke. Mgbe ịchọrọ izu ike, belata ihe mgbu ma ọ bụ naanị ịgbanahụ nchekasị kwa ụbọchị, ọ nweghị ihe dị mma karịa izu ike, iwelata ahụ mgbu, ịhịa aka n'ahụ siri ike.
Omume a, 'Iji' aka 'wee gwọọ, ejiriwo mmepeanya oge ochie kemgbe ọtụtụ narị afọ.
Site na usoro oge ochie, ịhịa aka n'ahụ na-abụ ọgwụgwọ a ma ama taa maka ezumike dị omimi, na-eleba anya n'okwu ahụike, yana ịrụ ọrụ dị ka ọgwụgwọ nkwado.
N'ọtụtụ spas, ndị na-agwọ ọrịa na-ejikarị mmanụ dị mkpa dị ka ihe inyeaka ọgwụgwọ na ịhịa aka n'ahụ, na-ekwu na ya bụ ịhịa aka n'ahụ. Ewepụtara na osisi, mmanu dị mkpa nwere uru ahụike, akọnuche na nke mmetụta uche ma nwee ike melite ahụmịzụ ọ bụla.
N'isiokwu a, anyị na-ekerịta mmanụ 6 dị mkpa kachasị mma maka ịhịa aka n'ahụ ka ị wee nwee izu ike, belata esemokwu, belata ihe mgbu ma wulite ahụmịhe spa nke okomoko nke onwe gị.
Ọzọkwa, ka anyị banye n'ime iji mmanụ dị mkpa maka ịhịa aka n'ahụ nwere ike ịbụ usoro magburu onwe ya iji jikọta ma uru ịhịa aka n'ahụ na ọgwụgwọ nke mmanụ dị mkpa iji bulie ahụike gị.
Uru Mkpuchi Masa Dị Mkpa
Enwere uru dị ịtụnanya na ịnweta ịhịa aka mmanụ dị mkpa, ị nwekwara ike irite uru na ịchepụta na iji mmanụ ịhịa aka n'ahụ gị kpọmkwem n'ụlọ gị! Nke ahụ pụtakwara na ọ nweghị mkpa ị gafere isi na mpaghara spa!
Ma ị na-enweta ịhịa aka n'ahụ onye gị na ya so ma ọ bụ jiri usoro ịhịa aka n'ahụ, n'ezie ị ga-erite uru na ntinye mmanụ dị mkpa na ịhịa aka.
'Masshịa aka n'ahụ aromatherapy bụ naanị maka izu ike', ọtụtụ mmadụ na-eche otu a. Ee e, nke ahụ bụ naanị ngwụcha nke ice.
Lee ọtụtụ uru dị na ịhịa aka dị mkpa ị nwere ike ịmaghị:
Istkpụ mmiri ma zụlite anụ ahụ
Akara gbatịrị akara ma gwọọ ọnya
Nagide nsogbu metụtara anụ ahụ dịka psoriasis na eczema
Nyere aka na mmerụ ahụ egwuregwu site na mbenata mmerụ ahụ
Gbochie mbufụt ma nwekwuo mgbanwe
Wepụ azụ mgbu
Belata ọrịa ogbu na nkwonkwo na mgbu
Mee ka akwara sikwuo ike ma nyere aka belata imeju
Mee ka nrụgide na nchekasị kwụsị
Kwalite izu ike ma belata nsogbu ihi ụra
Nyere ndi mmadu aka ịda mba
6 mmanụ kachasị mkpa maka ịhịa aka n'ahụ
Lavender mmanụ dị mkpa bụ mmanụ pụrụ iche maka ọgwụgwọ ịhịa aka n'ahụ dị mkpa. A na-ejikarị ya na akpụkpọ, ntutu, na ngwaahịa ngwaahịa na ọgwụgwọ.
Lavender bụ mmanụ kachasị ewu ewu dị mkpa dị n'ahịa. Mmanụ a dị mkpa nwere isi ọhụụ na-atọ ụtọ nke na-ewetara ha isi na-enye ume ọhụrụ na mpaghara izu ike. Dika otu n’ime mmanu mmanu ndi bara uru karie mmanu, mmanu mmanu bara uru mgbe nile. Lavender na-enye nnukwu uru dị ka inyere anyị aka iwepụ nrụgide, na-eme ka ọ pụta ìhè maka ịhịa aka n'ahụ na-agwọ ọrịa. Ọ nwere ike inye aka na izu ike ma kwalite ụra, mee ka ọkwa ike gị dị ka nke ọma.
Mpempe peppermint dị mkpa nwere ike inye aka belata isi ọwụwa na isi ọwụwa. N'ịrụ ọrụ dịka akwara anụ ahụ na - ewepụta ihe mgbu, ọ nwere ike belata ụfọdụ ụdị isi ọwụwa.
The menthol na pepemint mmanụ na-akwalite mgbasa ọbara ma na-enye mmetụ obi jụrụ, na-eme ka mgbu kwụsị.
N'otu nnyocha ọmụmụ sayensị na-enweghị ego na mmadụ 70 nwere ọrịa isi ọwụwa, mmanụ pepepe etinyere n’egedege ihu na ụlọ nsọ belata isi ọwụwa mgbe awa 2 gachara, ma e jiri ya tụnyere mmanụ placebo.
Okpukpo Peppermint nwere ike inye aka mee ka akwara dị mfe ma gwọọ isi ọwụwa. Tinye mmanụ pepemint n’ụlọ arụsị gị-Ọ na-enyere aka.
Ebe ọ bụ na mkpụrụ osisi na-eme ka ahụ dị jụụ, ọ nwere ike inyere ụmụ nwanyị aka ịkwụsịlata nkụchi nwanyị
Ọzọkwa, ikike pepemint dị ka akwara ike nwere ike inyere gị aka izu ike tupu ị lakpuo ụra.
Obi dị ya ụtọ maka ihe ndị e ji egbochi nje ya, mmanụ osisi tii nwere ike ịlụ ọgụ iro ma mee ka ọnyá ahụ dị mma.
Mmanụ nke osisi tii nwere ike ịbụ onye mgba kwesịrị ntụkwasị obi megide akụrụngwa. Ọtụtụ nnyocha egosila na ọ na - enyere aka belata ọnụọgụ na oke nhụjuanya nke ọnya.
N'otu nnyocha, itinye mmanụ ịhịa aka n'ahụ nke nwere osisi 5% tii n'ọrịa ọnya ọnya gosiri na ha karịrị okpukpu atọ karịa na -ebilata ọnụ ọgụgụ ọnya karịa sịọkụ.
Dịka nhọrọ ọzọ, ị nwere ike ịme ọgwụgwọ anụ ahụ nke gị site na ịgwakọta otu akụkụ tii tii na akụkụ itoolu na itinye ngwakọta ahụ na mpaghara emetụtara na Q-Tip
Soothe Skin Mmekpa Ahụ
Mmanụ nke tii nwere ike inye aka belata ọnya akpụkpọ.
Adị akpukpo anụ ahụ bụ akpọnwụ akpịrị, nke na-eme mgbe akpụkpọ ahụ bịara na kọntaktị na nke allergen, nke na-ebute ọbara ọbara, itching na mgbe ụfọdụ akpụkpọ ahụ na-egbu mgbu. Ọ bụ ihe obi ụtọ na mmanụ osisi tii nwere ike inyere ndị mmadụ aka belata mgbaàmà ndị a.
Iji osisi tii dị ka ịhịa aka n'ahụ mmanụ dị mkpa iji belata anụ ahụ gbara agba:
Ikpokọta mmanụ iri nke tii mmanụ otu ngaji nke almond na otu tablespoon nke mmanụ aki oyibo.
Gwakọta nke ọma, ma chekwaa ngwakọta ahụ n'ime akpa a kwachara akara.
Mee mpaghara emetụtara ozugbo otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'ụbọchị.
Nnyocha na-egosi na mmanụ mmanụ dị mkpa dị na mmanụ belata nkwonkwo mgbu. N’ezie, ọtụtụ mmanụ mmanu a na-ahụkarị na lotion eji mee ka ahụ erughị ala site n’ọnọdụ anụ ahụ dịka ọrịa ogbu na nkwonkwo na osteoarthritis nwere mmanụ a dị mkpa.
Eucalyptus mmanụ na-enyere aka belata ihe mgbu na mbufụt metụtara ọtụtụ ọnọdụ anụ ahụ. Ọ bakwara uru nye ndị na-arịa mgbu azụ ma ọ bụ ndị na-agbake site na mmerụ ahụ ma ọ bụ akwara. Soro dọkịta gị kwurịta ma o ziri ezi maka gị n'ọnọdụ enyere.
4 usoro iji nye nkwonkwo dị mkpa ịhịa aka mmanụ:
Tupu ị banye na nkwonkwo ahụ, ịkwesịrị ịkpụ akwara ahụ aka-na ịhịa aka na mpaghara buru ibu n'akụkụ nkwonkwo ahụ nkeji ole na ole.
Tinye mmanụ ịhịa aka n'ahụ na nkwonkwo.
Jiri mkpịsị aka megharịa azụ ma jiri ụkwụ mee ma mee mkpagharị n'olu.
Tinye akwa mkpuchi na-ekpo ọkụ tupu ma ọ bụ mgbe ị nwetasịrị ahụ ike.
Enwere ụfọdụ ihe kpatara na a na-ewere mmanụ dị mkpa nke chamomile dị ka mmanụ dị oke mkpa. A na-ejikarị ya maka ịkụ ala, ime ka iku ume miri emi, ikpuchi ume, inye aka na ntụgharị uche ma nyere ndị mmadụ aka izu ike. Chamomile nwekwara ihe ogwugwu oria na ogwugwu.
Elling dị elu dị egwu, chamomile na-eme onwe ya ezigbo ntọala maka ngwakọta. Maka ngwakọta ngwa ngwa ma dị mfe, jiri obere lavender nwaa ya.
Na-emegharị ahụ na anụ ahụ, mmanụ dị mkpa nke chamomile nwekwara ike bulie ọnọdụ gị.
Mmanụ oroma mmanụ dị mkpa
Mmanụ oroma dị ụtọ dị mkpa na-echta mmetụta na-enye ume ọhụrụ, na-ewuli elu, nke na-ekpo ọkụ ma na-enwu gbaa.
Na ịhịa aka n'ahụ, therapist na-eji oroma dị mkpa mmanụ iji mee ka ọbara mmadụ na-aga. A kwenyere na mmanụ a dị mkpa ga-ebelata ahụ erughị ala metụtara mbufụt, isi ọwụwa, na ịda mba.
Banyere nlekọta anụ ahụ, mmanụ mmanụ oroma dị mkpa na-enyere aka n'ịkwalite ịcha akpụkpọ na ịdị ọcha, na-ebute mmezi nke anụ ahụ na udiri.
Na mgbakwunye, isi ahụ dị ụtọ nke mmanụ oroma dị mkpa nwere mmetụta dị jụụ ma na-eme ka mmadụ nwekwuo ume, nke na-enyere ndị mmadụ aka belata ọ̀tụ̀tụ̀ pulse.
Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka ebe a na-ekpo ọkụ, mana ọ na-emekwa ka ike nke sistem na-ekpochapụ ma na-ewepụ nje ndị na-efe efe.
Maka ihe ozo, mmanu oroma di nkpa na-ebelata ihe mgbu nke akwara n’egbu ogwu. Ọ nwere ike ịbụ nkwado inyeaka iji belata nchekasị, afọ mgbu, afọ ọsịsa, afọ ntachi, afọ mgbu, na mkpọchi imi.
Etu esi eji mmanụ oroma dị ụtọ dị ka ịhịa aka n'ahụ mmanụ dị mkpa
Ikwesiri itugide oroma mmanụ dị mkpa na mmanụ ụgbọelu dị ka mmanụ aki oyibo ma ọ bụ mmanụ almọnd. AromaEasy na-atụ aro ka ị jiri ihe dị ka 15 tụlee nke mmanụ dị mkpa kwa ounce mmanụ mmanụ na-eme mmanụ ịhịa aka na iji 2.5%.
Mara: Ejila ma ọ bụ hapụ ọgwụ a na anụ ahụ n'ehihie ma ọ bụ na anwụ.
Ndị na-ebu mmanụ na AromaEasy na-akwado
Wepụtara site na almọnd ndị a gbanyere mmanụ, mmanụ mmanụ almọnd dị ụtọ nwere obere isi.
Agaghị m eju gị anya ma ọ bụrụ na ịhịa aka gị na-agwọ ọrịa na spa spa dị n'ógbè ahụ na-ahọrọ mmanụ almọnd dị ụtọ. Ọ bụ mmanụ dị iche iche maka ịhịa aka n'ahụ-mmanụ almọnd mmanụ agwakọta nke ọma na mmanụ ọ bụla ọzọ dị mkpa.
Dị ka o kwesịrị, akpụkpọ gị ga-amịpụta mmanụ almọnd n'ụzọ dị mfe, ma mmanụ a agaghị eme pores.
Lightbụ nke na-esighị ike, nke na-enweghị isi, na nke enweghị agba, akụ oyibo bụ mmanụ ọzọ nke mmanụ ụgbọelu kachasị amasị m. Ọ bụ ezie na mmanụ aki oyibo na-abanye ngwa ngwa, ọ na-enyere akpụkpọ ahụ aka ịnwe mmiri. Ọzọkwa, Ọ na - enyere aka ihichaa isi ma kpochapụ ọrịa ahụ site na ihe onwunwe ya. Nwere onwe gị ịtinye mmanụ ọ bụla dị mkpa na aki oyibo, ọ gaghị emechu gị ihu.
Etu ị ga-esi malite ịhịa aka n'ahụ mmanụ n'ụlọ
Iji malite, AromaEasy na-atụ aro ka ị gbaa onye òtù ọlụlụ gị, onye òtù ezinụlọ gị, ma ọ bụ ezigbo ndị enyi gị ume ka ha nye gị ịhịa aka-ma ọ bụ jụọ onye na-agwọ ọrịa anụ ahụ.
Gbaa mbọ hụ na ị na-eji elu dị elu nke ọma maka onye na-agwọ ịhịa aka gị. Otutu akwa ga-eme nke ọma.
Nzo ukwu nke ato bu iguzo onodu gi: kpoo oriọna, kpoo oriọna, yikwasi ufodu egwu. Pro ịhịa aka n'ahụ Pro nwere nzube maka ịme ihe a!
Họrọ mmanụ dị mkpa iji gboo mkpa gị. Dịka ọmụmaatụ, jiri mmanụ lavender dị mkpa iji belata nchekasị, obere mkpo maka akwara olu, yana mmiri mmiri maka mgbu.
Gwakọta mmanụ gị dị mkpa na mmanụ ụgbọelu n'ime karama - ma ọ bụ kwụ ọtọ n'ọbụ aka gị ma ọ bụrụ na ị na-enyocha ngwakọta ọhụrụ.
Tinye akpa mmanụ ịhịa aka n'ahụ na aka gị ma buru ụzọ tee aka gị ka mmanụ ịhịa aka dị ọkụ. IJI wụsa mmanụ ahụ n'ime karama ahụ n'ahụ gị!
Agehịa aka na ebe ọ bụla ịchọrọ!
Kpachara anya ma tụọ aro
Ọ gwụla ma etinyerela ya mmanụ, ejila mmanụ dị mkpa.
Mmanụ ndị dị mkpa bụ ihe okike ma dị ike. Afọdụ ndị nwere ike ịrịa ụdị mmanụ ụfọdụ. AromaEasy na-atụ aro na ị ga-eme obere nnwale akpụkpọ ahụ na ogwe aka gị ma ọ bụ ụkwụ gị (ọ bụghị imi gị, ihu ma ọ bụ olu) iji hụ na ị gaghị enweta nsonaazụ na-achọghị.
Ọ bụrụ na ị dị ime, na-enye nwa ara, ma ọ bụ ụdị ọgwụ ọ bụla, biko gwa dọkịta gị tupu ị jiri mmanụ dị mkpa.
Enwere ike ịme ịhịa aka dị iche iche site n'aka ọtụtụ ndị ọrụ nlekọta ahụike, dịka onye na-ahụ maka anụ ahụ, onye na-ahụ maka ọrụ ma ọ bụ ịhịa aka n'ahụ. O nwere ọtụtụ uru nwere ike ịre n’usoro na n’onweghị aka n’enyere gị aka imeta ihe mgbaru ọsọ gị. Ọ bụrụ na ịnwalela ịhịa ahụ mmadụ kpamkpam, a na-atụkarị aro ka ịme ya.
Osisi mmanụ mmanụ 6 kachasị mkpa maka ụgbọ ala 2020
Otu echiche na “Ihe kachasị mma ịhịa aka mmanụ 6 dị mkpa"
Ismail ekwu, sị:
Ngwaọrụ иенр интересная статья. Асибо большое редактором. Отелось еще больше узнать.
March 22, 2021 na 12: 30 pm